Soosaarida genomic DNA, soosaarida DNA plasmid, iyo soo saarida nucleic acid iyo sifaynta shaybaarada kaladuwan. Hawlgal dareere oo si otomaatig ah loo adeegsado si loo gaaro hawlgallo soo-saar sare, sida roobka soo da'a, soo saaridda dareeraha, iyo ka shaqeynta unugyada xoolaha, bakteeriyada, dhirta, carrada, shaybaarka caafimaadka, khamiirka, iwm.
Saxanka ceelka qoto dheer wuxuu ka sameysan yahay polypropylene, shey polymer leh iswaafajin kiimiko oo wanaagsan. Waxaa loo isticmaali karaa keydinta xalka ugu badan ee xalka dabiiciga ah, aashitada iyo xalalka alkaline ee shaybaarka.
Heerkulka 2.High iyo nadiifinta cadaadiska sare, waa la is dulsaari karaa si loo badbaadiyo booska. Saxanka oo dhan ma leh xumbo, xariiq ma leh, mana laha wax daadanaya. Madhalays ka dhigida Gamma-ray iyo jeermis-dilis la'aan waa ikhtiyaari.
3.No DNA iyo RNA enzymes, majirto ilo kuleyl. U hoggaansanaanta heerarka SBS / ANSI ee loogu talagalay dhuumaha fara badan ee kanaalka iyo xarumaha shaqada ee otomaatiga ah.
Waxyaabaha polypropylene tayo sare leh, Hal kuleylka kuleylka ah, bulk ama safafka ay ku jiraan safafka khariidadda khariidadda, Cabbirka Yaryar, oo fududahay in la keydiyo
5.Sample kaydinta: waxay beddeli kartaa tubbada guud ee 1.5ml centrifuge si loo keydiyo shaybaarka, waxaana loo diyaarin karaa si nadiif ah si loo badbaadiyo booska, oo leh awood weyn oo keyd ah, waxayna u adkeysan kartaa -80 condition xaaladda qaboojiyaha. Sidaa darteed, waxaa sidoo kale loo yaqaan saxanka keydinta.
6.Sample processing: waxaa loo isticmaali karaa marka lagu daro biibiileyaal badan, soosaarayaasha dareeraha otomaatiga ah ee waxsoosaarka sare iyo softwares kala duwan si loogu oggolaado hawlgalka sare ee soosaarka bayoolojiga, tusaale ahaan, roobka roobka, soo saarista dareeraha, soo saarista nukleerka acid, iwm. Si weyn u wanaajiya waxtarka ka baaraandegidda muunadda. Wuu u adkeysan karaa heerkulka sare
7.Board ma laha xumbo, karbaash ma jiraan, wax daadanaya, xoog farsamo sare, waaxda isku xidhka adag;
8.ladejiso xitaa mugga shaqada ee waaweyn, illaa 1.2 mL ama mugga kaydinta 2.2 mL halkii ceelba;
Barootiinnada iyo DNA uma hoggaansami doonaan PP, oo u oggolaanaya soo kabashada muunadda oo dhammaystiran.
9. Midabka dabiiciga wuxuu sahlayaa helitaanka naqshadda darajada. Isticmaal: Lagu dabaqi karo nidaamka aqoonsiga, HTS, muunadaynta sayidka
muunad, muunad qaadis iyo farsamo si toos ah u dhaqaajisa;
10.96 Suxuunta Well Well waxaa loo isticmaali karaa koritaanka dhaqamada bakteeriyada ama keydinta xeryahooda.
Ahraamta-hoose waxay fududeysaa soo-qaadista muunadda waxayna hagaajisaa isku-dhex-dhexgalka si wanaagsan iyada oo la abuurayo waxyeello halkii ay ka noqon lahayd wareegga
11.Markay kacsantahay, dhismaha polypropylene wuxuu bixiyaa dusha hoose ee isku xidhka si looga hortago shaybaarka inay ku dhagaan darbiyada dhinacyada.
MAYA. Sharaxaad Waa hagaag Mugga Qaab Hoose Xirxirida / Ctns Madhalays ka dhigida
PC0016 Qoto dheer saxanka 96 2.2ml Barxad U 50 Ikhtiyaar
PC0017 Qoto dheer saxanka 96 2.2ml Barxad U 50 Ikhtiyaar
PC0018 Qoto dheer saxanka 96 2.2ml Barxad V 50 Ikhtiyaar
PC0053 6 tuubbo xarig ah 6 2.2ml Barxad U 1500 Ikhtiyaar
PC0053F Saxan (hayayaal) JOOJI 2.2ml / / 168 Ikhtiyaar
PC1064 Qoto dheer saxanka 96 2.0ml Barxad U 50 Ikhtiyaar
PC0073 Saxanka Elution 96 0.5ml Barxad V 100 Ikhtiyaar
PC0076 8 tuubbo xarig ah 8 2.2ml Barxad V 1500 Ikhtiyaar
PC0076F Saxan (hayayaal) JOOJI 2.2ml / / 168 Ikhtiyaar
PC0084 Qoto dheer saxanka 96 2.2ml Barxad U 50 Ikhtiyaar
PC0085 Qoto dheer saxanka 96 1.6ml Barxad V 80 Ikhtiyaar
Hore: Saxanka PCR
Xiga: Strip-ul Comb
PC0016 2.2ml 96 saxan si fiican u qoto dheer U hoose
PC0017 2.2ml 96 saxan si fiican u qoto dheer V hoose
PC0018 2.2ml 96 saxan si fiican u qoto dheer U hoose
PC0053 6 tube xarig ah
PC0076 8 tuubada xargaha V hoose
PC0084 2.2ml 96 saxan si fiican u qoto dheer oo aan go 'lahayn
PC0085 1.6ml 96 saxan si fiican u qoto dheer V hoose
PC1064 2.0ml 96 saxan si fiican u qoto dheer U hoose